Liverpool oo Chelsea kula dagaallameysa saxiixa xiddig u ciyaara Barcelona kaasoo wada-xaajood heshiis kordhin ah kula jira kooxdiisa – Gool FM
(England) 26 Nof 2021. Kooxaha ka dhisan dalka Ingiriiska ee Liverpool iyo Chelsea ayaa diyaar u ah inay tartan fool ka fool ah u galaan sidii ay u kala dhantaali lahaayeen Barcelona oo la tacaaleysa kordhinta qandaraasyada xiddigaheeda lacag yari heysata awgeed.
Barca ayaa tacaaleysa inay heshiiska u kordhiso difaaceeda Ronald Araujo inkastoo uu wada-xaajood heer wanaagsan maraya uu u socdo, sidaas darteed, Blues ayaa diyaar u ah inay gacanta ku dhigto xiddiga reer Uruguay xagaaga soo aaddan si ay ugu xoojiso safkeeda difaaca maadaama Antonio Rudiger iyo Thiago Silva qandaraasyadooda Stamdord Bridge ay dhici doonaan.
Hase ahaatee, wargeyska ESPN ayaa intaas ku daray inay Reds sidoo kalena xiiseyneyso 22-sano jirkan si ay ugu kabto difaaceeda dhexe, waxayna diyaar u tahay inay Chelsea la gasho tartan xooggan oo ku aaddan saxiixa xiddiga Barca.
Si kastaba ha ahaatee, qandaraaska Araujo ee naadiga Barcelona ayaa dhici doona xagaaga 2023, hase ahaatee, shaki weyn ayaa ku dul dahaaran mustaqbalkiisa Camp Nou maadaama naadiga La Liga ka ciyaarta aysan sare u qaadi karin mushaharkiisa.
Man City oo si la yaab leh wada-xaajood ula bilawday wakiillada mid ka mid ah xiddigaha loo saadaalinayo Ballon d'Or sanadkan